Bareyaasha 4 Heer Sare (E4E) waxay u shaqeysaa inay hubiso in codadka macallimiinta fasalka lagu daro go'aannada saameeya mihnadooda iyo ardaydooda. E4E wuxuu himilo geliyaa xirfad sare oo waxbaris heer sare ah taas oo barayaashu ay hormuud u yihiin gudaha iyo banaanka fasalladooda si ay u wadaan natiijooyinka togan ee ardayda. E4E waxay heshaa miisaaniyadaha hawlgalka guud iyada oo loo marayo barnaamijka 'McKnight's Education & Learning program' iyada oo lagu taageerayo cutubka Minnesota E4E.
Barayaasha tacliinta sare waxay ku talinayaan xirfad barayaal sareeya, oo barayaashu ay hoggaamiyaan hoggaamiyeyaasha gudaha iyo dibaddaba fasalkooda si ay u gaarsiiyaan natiijo waxtar leh ardayda.
Febraayo 21, 2015, in ka badan 100 barayaasha iyo beesha beesha ayaa isugu yimid shir-sannadeedkii ugu horreeyay ee E4E-MN, Voices for Equity iyo Macallin Kala duwanaanta. Kaqeybgalayaashu waxay u soo urureen inay kaqeybqaataan bilowga kooxda 2015 ee Nidaamka Macallimiinta ee Macallimiinta ee kaladuwanaanshaha macallimiinta. Maalinta waxaa ka buuxsamay fursado ay barayaasha wax ku bartaan oo ku saabsan talooyinka siyaasadaha ee ku xusan warqadda, oo ay dhiiri geliyeen kuwa ku hadla iyo kuwa waxqabadka sameeya, oo ay wax ku bartaan kal-fadhiyada ay macallimiintu hoggaaminayaan ee loogu talagalay in lagu xoojiyo xirfadooda u doodista wadareed. Kaliya maahan barayaashu inay horumariyaan talooyinka siyaasadeed ee la sii daayay maalintaas, waxay sidoo kale soo bandhigeen 12 kal-fadhiyo ku saabsan mowduucyada ay ka mid yihiin "Dhisidda Qaab Sinaanta Jinsiyadeed," "Qalabka U doodista Macallimiinta," "Istaraatiijiyadda lagu guuleysto Kala-duwanaanshaha Macallinka," iyo in ka badan. Shirka ka dib, barayaashu waxay qaadeen tallaabo horay loogu qaaday si loogu doodo xirfad waxbaris oo sare loo qaaday iyo natiijooyinka ardayda oo la wanaajiyey. Waxay dhiseen shabakad cusub oo hogaamiyayaal ah oo ka shaqeyn doona hubinta in dhammaan ardayda reer Minnesota, gaar ahaan ardayda midabka leh, ay fursad u helaan inay wax ka bartaan macallimiinta asalka kala duwan. Hore u soco, E4E wuxuu ugu yeerayaa shabakaddan hogaamiyaasha in ay mooshin ka gutaan 203 howlihii wadajirka ahaa ee lagu qabtay shirkii.
Barayaashu 4 waxay u bilaabeen sidii koox macallimiin ah oo New York ah oo doonayay in ay bedelaan habka ugu sareeya ee siyaasad-dejinta, taas oo inta badan ka fogaanaysay macalimiinta ka soo go'aaminta muhiimka ah ee qaabeeyey fasaladooda iyo xirfadahooda. Waxay ku keceen dhaqdhaqaaq qaran oo macallimiin ah oo u horseeday inay bedelaan nidaamkayaga waxbarasho. Maanta, macallimiinta E4E ee dalka oo idil waxay baranayaan siyaasadda waxbarashada, isku xirka asxaabta isku midka ah, iyo qaadashada tallaabooyin si loo hubiyo in khibradooda fasalka ay ku wargeliyaan go'aamada saameynaya xirfaddooda iyo ardaydooda.